ဆရာသစ်ရေ ကျနော် တို့ သင်တန်းလေး ဖွင့်နိုင်တော့မယ်ဗျို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » ဆရာသစ်ရေ ကျနော် တို့ သင်တန်းလေး ဖွင့်နိုင်တော့မယ်ဗျို့
Posted by Swal Taw Ywet on Jul 4, 2012 in Education, Ideas & Plans | 36 comments
MG Villagers To SaYar Thit Min
ရွာထဲမှာ ကျနော်လေးစားအားကျရတဲ့ ဆရာသစ်(ကိုသစ်မင်း) တစ်ယောက် ပျောက်ချက်သား ကောင်းနေပေမယ့် သူ့ post လေးတွေရဲ့ အကျိုးဆက်လေးတစ်ခုနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဒီစာစုလေးနဲ့ ရင်ဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါပြီ။
04 .Feb. 2012. က ဆရာသစ် “ပညာရေးနှင့် အတွေ့အကြုံ
– thit min |1701- Hits| ” နဲ့ Idea လေးပေး ထောက်ပြထားခဲ့တယ်ခင်ဗျ။ Vocational Education နဲ့ ပါတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့။ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူငယ်အများစုအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်တွေသင်ပေးပြီး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ပွင့်လင်းလာတဲ့အချိန်ကျရင် အဆင်သင့်ဖြစ်နေစေဘို့ပေါ့။
အဲဒီ့တုန်းက ကျနော်က ကျနော့်အိပ်မက်လေးတစ်ခုနဲ့ တူနေခဲ့တာမို့ သင်တန်းလေး တစ်ခုဖွင့်ဖို့ စိတ်ကူးထားကြောင်း ၀င်မန့်ခဲ့မိတယ်။ ဆရာသစ်က ချက်ချင်းလိုလို အားပေးစကားပြော၊ အောင်မြင်မှာပါလို့ စကားဦးသန်း နိမိတ်ဖတ် ပေးခဲ့တာပေါ့ဗျာ။
အခု ကျနော် စွယ်တော်ရွက် ပြောထားခဲ့တဲ့အတိုင်း လျှပ်စစ်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေ များများလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းလေး တစ်ခုဖွင့်ဖို့ ခြေလှမ်းတွေ စနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း ဆရာသစ်ကို သိစေချင်လိုက်တာ။ ကိုဂီ့အပြောအရတော့ ခြင်္သေ့မြို့တော် ရောက်နေတယ်ဆိုဘဲ။ အလုပ်တွေ ၂ ဆပိုလုပ်ရတော့မယ်ဆိုပြီး ပျောက်သွားလိုက်တဲ့ ဆရာသစ် အခု ဒီစာစုလေးကို ဖတ်ဖြစ်ပြီး ဂေဇတ်ထဲက ညီငယ်တစ်ယောက်ကို အားပေးတဲ့အနေနဲ့ စာတွေပြန်ရေးပါဦးလို့လဲ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နော။
သင်တန်းဖွင့်မယ်ဆိုတော့ ရန်ကုန်ရဲ့ သင်တန်းအများစုရှိရာ လှည်းတန်း တ၀ိုက်ကိုပဲ ဦးစားပေး နေရာရွေးခဲ့လိုက်တာ အခန်းခတွေကလည် ကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲ။ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့က အတွင်းဖက်သိပ်ကျလွန်းတဲ့နေရာတွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆုံး ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ့အတွင်းဖက်နေရာလေး တစ်ခုကိုပဲ ငှားလိုက်တော့မယ်လို့ စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျနော့်ရဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ကို တိုင်ပင်ကြည့်လိုက်မိတော့ သင်တန်းအသစ် စဖွင့်မှာမို့လို့ လူမြင်ကွင်း၊ သွားလာရလွယ်တဲ့ နေရာကိုပဲ ဦးစားပေးပါလို့ အကြံပေးလာပါတယ်။ အဲဒီ့တော့ ပထမရွေးထားတဲ့ နေရာလေးကို မငှားဖြစ်တော့ပဲ ဆက်ရှာလိုက်တာ ကိုယ်နဲ့ ကံစပ်လို့ပဲလား၊ ကာတာလို အာရပ်နိုင်ငံက ရုံးခန်းစားပွဲပေါ်မှာ ပိုင်ရှင်ဘယ်သူမှန်းမသိပဲ ရောက်နေတာတွေ့လို့ မြန်မာပြည်အပြန်မှာ ပင့်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဒရုပ်ပွားတော် သစ်သားဆင်းတုလေးရဲ့ အကြောင်းတရားကြောင့်ပဲလားတော့မသိ၊ အင်းစိန်လမ်းမပေါ် ဆင်ရေတွင်းမှတ်တိုင်နဲ့ စံရိပ်ငြိမ် မှတ်တိုင်ကြားက ၂ ထပ်တိုက်လေးတစ်လုံးရဲ့ အပေါ်ထပ်ကို တစ်လကို ၁၂၀၀၀၀/- နဲ့ ငှားရမ်းလို့ရခဲ့ပါတယ်။ (၆)လစာ အပျောက်ပေးရ ပြီး ပွဲစားခက (၁) လစာပေးလိုက်ရတော့ စုလာခဲ့တဲ့ အစိမ်းလေး တွေကုန်သလောက် ဖြစ်သွားပေမယ့် ပျော်နေပါတယ်။
ဦးဦးပါလေရာဆီက ရရှိလိုက်တဲ့ နောက်တစ်လ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရေး စိတ်ဓါတ်နဲ့ ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမယ့် ကျနော် ဂေဇတ်ရွာသားပါခင်ဗျ။
သင်တန်းအမည်ပေးဖို့စဉ်းစားလိုက်မိတော့ MG ကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ “စွယ်တော်ရွက်” ဆိ်ုတဲ့ နာမည်ကိုပဲ သင်တန်းအမည်အဖြစ် ဆက်လက်အသုံးပြုမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး လက်တွေ့များများ လုပ်ပေးတဲ့ သင်တန်းလေး အဖြစ် အခြေခံကစပြီး လိုတိုရှင်း သင်ပေးဘို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးကအစပြုပြီးတော့ ခလုပ် (၁) ခု မီးတစ်ပွင့် ၊ ခလုပ် (၃) ခု မီး (၃) ပွင့် ပလပ်ပေါက် (Socket) (၁) ခု စတာမျိုးလေးတွေ၊ ကနေ မီးတစ်ပွင့်ကို နေရာ (၂) နေရာကနေ ထိန်းတဲ့ Two Way Switch တပ်ဆင်ဆက်သွယ်နည်း တွေအထိ လူတစ်ယောက် ပစ္စည်း (၁) စုံ နှုန်းနဲ့ လူ (၅) ယောက်၊ စာသင်ချိန်က တစ်ချိန်ကို (၂) နာရီ စနစ်နဲ့ သင်ကြားပေးမှာပါ။
ဟိုးတုန်းက GTI/THS ကျောင်းတွေမှာလို နံရံမှာ တစ်ဒုံးဒုံး ထုနှက် ပြီး တကယ်တပ်ဆင်ရတာမျိုး လုပ်ဖို့အခြေအနေ မပေးပေမယ့် စားပွဲပေါ်မှာ ပစ္စည်းတွေဆင်၊ စမ်းသပ်၊ မှန်ရင်ပြန်ဖြုတ်၊ နောက်တစ်မျိုး ထပ်ဆင်၊ မှားရင် ဘယ်နေရာမှာမှားတာလဲ ဆိုတဲ့ Trouble Shoot လုပ်နည်း လက်တွေ့ကျင့်ကြပေါ့လေ။
ကြုံတုန်းလေး.. ဟိုအရင် အင်းစိန် GTI က ဆရာကြီး ဦးမျိုးဆွေရဲ့ မမေ့နိုင်တဲ့ လိုတိုရှင်း သင်ပြချက်လေး မျှပေးပါရစေ။
“SHORT BY BREAK, BREAK BY SHORT” တဲ့။
၀ါယာကြိုးသွယ်တန်းစနစ်ရဲ့ ပြသနာရှာဖွေရေး အဓိက နည်းလမ်းဖြစ်တဲ့
“To Find Short, Make Break” ပတ်လမ်းတိုအပြစ် ဖြစ်နေတဲ့နေရာကို တွေ့ချင်ရင် ဖြတ်ပြီးတော့ရှာ
“To Find Break, Make Short” ကြိုးပြတ်နေတဲ့နေရာကို တွေ့ချင်ရင် short Circuit လုပ်ပြီးရှာ
ဆိုတဲ့ Trouble Shooting ကို အတိုဆုံး သင်ပေးခဲ့တာပါ ခင်ဗျ။ ဆရာကြီးဦးမျိုးဆွေရဲ့ မှာကြားချက်ကို အင်းစိန် GTI မှာလုပ်တဲ့ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဆရာများ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာ တက်ခွင့်ရခဲ့စဉ်က နာကြားမှတ်သား အသုံးချနိုင်ခဲ့တာပါ ခင်ဗျ။
အဲလို၊ အဲလို ဘ၀တစ်သက်လုံး အသုံးဝင်နိုင်မယ့် လျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့လုပ်ငန်းလေးတွေ ပြန်ပြီး မျှဝေချင်ခဲ့လို့ သင်တန်းဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားနေမိတာပါ။
အဆင့်နဲနဲမြင့်မယ့် Motor Control Technology အခြေခံ၊ Direct On Line Starter, Forward Reverse Starter နဲ့ Star- Delta Starter အကြောင်းတွေကိုတော့ Control Circuit လောက်ပဲ လက်တွေ့သင်ကြားပေးနိုင်မှာပါ။ လောလောဆယ် Three Phase Supply မရှိလို့ Three Phase Motor တွေမောင်းပြလို့ မရလို့ပါ။
ဆရာကျောင်းသားအချိုး ကျောင်းသားနဲ့ လက်တွေ့ခန်းအချိုး မညီမမျှဖြစ်နေတဲ့ GTC ကျောင်းတွေရဲ့ ကွက်လပ်လေးကို အပြင်ဘက်ကနေ ဖြည့်ပေးချင်တဲ့ စေတနာ၊ ကိုယ့်ကို ထမင်းရှာစားစေနိုင်ခဲ့တဲ့ လျှပ်စစ်ပညာရပ်ကို ပြန်ဖြန့်ဝေပေးချင်တဲ့ ၀ါသနာတွေကို အရင်းခံပြီး သင်ကြားပေးမှာပါ။ သင်တန်းတစ်ချိန်မှာ လူ (၅) ယောက်လို့ပဲ သတ်မှတ်ထားတာကတော့ လက်တွေ့သင်ကြားရေးကို ဖိဖိစီးစီးသင်ပေးနိုင်အောင်လို့ပါပဲ။
သင်တန်းကျောင်းလေးရဲ့ Logo ကိုစွယ်တော်ရွက်ပုံလေးရဲ့ ရွက်လွှာတစ်ခြမ်းမှာ ”အတတ်” နောက်တစ်ခြမ်းမှာ “အသိ” လို့ ရေးထားတာလေးကို စဉ်းစားမိတော့ ရွာထဲက မနောဖြူလေးကို သတိရနေမိတယ်။ မဝေေ၀ တို့ မမ တို့၊ ကိုကြီးမိုက်တို့လို RIT ဆင်း တွေရဲ့ အကြံဥာဏ်တွေလဲ မျှော်လင့်နေမိတယ်။ ဒီလိုသင်တန်းလေးတွေရဲ့ အရေးပါပုံကို High Light လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာသစ်ကိုတော့ သတိအရဆုံးပေါ့။
အခု ဆရာသစ် အားပေးခဲ့တဲ့ သင်တန်းလေး တစ်ခုအတွက် နေရာလေးတစ်ခုလည်း ရပြီးပါပြီ။ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေလည်း ၀ယ်ယူစုဆောင်းပြီးပါပြီ၊ သင်တန်းရဲ့ Safety အတွက်လည်း Earth Leakage Circuit Breaker တွေကို တပ်ဆင်ထားပြီးပါပြီ။
အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ နောက်တစ်ပတ်လောက်ဆို သင်တန်းလေး စတင်ဖွင့်လှစ်တော့မှာပါ။ ဆရာသစ်ရဲ့ Post လေးတစ်ခုကို အမှီပြု လက်တွေ့တည်ဆောက်ကြည့်မယ့် “MG ရွာသားတစ်ယောက် ဖြစ်လို့ ညံ့လို့မရသော” ကျနော် စွယ်တော်ရွက်ရဲ့ “စွယ်တော်ရွက်” လျှပ်စစ် လက်တွေ့သင်တန်းလေးကို အချိန်ပေးနိုင်ခဲ့ရင် လာအားပေးပါဦးလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ ဂေဇက်ရွာသူ၊ရွာသားတွေဆီက အကြံဥာဏ်နဲ့ အားပေးမှုလေးတွေကိုလည်း မျှော်လင့်နေပါတယ်။
သင်တန်းနေရာက ကျွန်မနဲ့တော်တော်နီးတဲ့နေရာဖြစ်နေလို့ လာအားပေးပါအုန်းမယ် …
လျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ ဘာမှနားမလည်လို့ အကြံမပေးတော့ဘူးနော် ..
ကျွန်မလဲ သင်တန်းတစ်ခုဖွင့်ချင်တဲ့စိတ်ကူးရှိနေတယ် … ကိုစွယ်တော်ရွက်ဆီကနေပဲ အကြံဥာဏ်တွေ ပြန်တောင်းခံရပါအုန်းမယ် …
သင်တန်းတစ်ခုဖွင့်နိုင်တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ် …
ကိုသစ်က … သီဟပူရ နဲ့ အရှေ့ကျွန်းကို
ကိုသစ်ကို ကျနော်လည်း သတိရနေပါကြောင်း..
သည်ကနေ တခါတည်း ပြောခဲ့ပါရစေဗျာ ….
သင်တန်းချိန်၊သင်တန်းကာလ၊သင်တန်းသားရှိရမယ့် အရည်အချင်းလေးတွေ ရေးပေးပါအုံး။
ကျောင်းသားတွေနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ လေ့ကျင့်နိုင်အောင်လို့ အချိန်ကို အဆင်ပြေအောင် ညှိပေးပြီး သင်ပေးချင်ပါတယ်။ မနက် ၇ နာရီကစ ည၁၀ နာရီအထိပေါ့
သင်တန်းတည်ရာမှာပဲ နေနေတဲ့အတွက် အချိန်ညှိပေးနိုင်မှာပါ။ တကယ်တတ်ကျွမ်းချင်သူအတွက် လေ့ကျင့်ချိန် ၄ နာရီမှ ၆ နာရီ လောက်နဲ့ ပြတ်အောင် Course အတိုလေးတွေပဲ လုပ်ထားပါတယ်။ သင်တန်းတက်ဖို့လည်း အပန်းမကြီးရအောင်ပါ။
အထူး ဂုဏ်ယူပါတယ် အစ်ကိုကြီး စွယ်တော်ရွက်ရေ … အကြံ ပေးရရင်တော့ .. ကြေညာ လေးတွေ ပစ်စေချင်တယ်ဗျို့  …။သင်တန်း တစ်ခု ဆိုတာ ရေရှည် သွားရတယ် ဆိုပေမယ့် ….. အစပိုင်း ကို ကြေညာအားလေး နဲ့သွားလိုက်ရင် အခန်းခ အကြေမြန် ပြီးနောက်ပိုင်း အပေါ်ကြေး နဲ့ သွားရင်း ထောင်တက် သွားနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Congratulation ပါ ကိုစွယ်တော်ရွက်ရေ …
အားပေးပါတယ် ။ ဒါလေးနဲ့လည်း မရပ်ဘဲ ကျွန်တော့်စိတ်ထင်ပြောတာနော် ..ကိုစွယ်တော်ရွက်က building maintenance လုပ်လာခဲ့တယ်လို့ထင်ပါသည် ။ ဟုတ်ခဲ့ရင် အဲ့ဒီ့ အတွက်လည်း ခြေလှမ်းပြင်ထားရင် မမှားနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါသည် ။ အထင်နဲ့ ရမ်းတုတ်ခြင်းဖြစ်လို့ မဟုတ်ရင်လည်းစိတ်မရှိနဲ့နော် ..
စကား အတင်းစပ် … စာ ဘယ်သူရိုက်ပေးတာလဲ ။ ကိုယ်တိုင်ရိုက်နိုင်ပြီလား … :grin:
Dear Brother Ko Htoo San,
Sorry, Till now I could not type Myanmar font.
The staffs from my friend’s Internet cafe type this for me.
Yes, I will try to use Myanmar font by my self.
Wishing for you al to be in good health and good wealth.
ဆရာ ကိုစွယ်တော်ရွက်ရေ …
ဇွဲ နဲ့ သတ္တိ ကိုတော့တအား လေးစားတယ်ဗျာ။
သင်တန်းလက်တွေ့ ပေးဖို့သင်ထောက်ကူပစ္စည်းစရိတ်၊ အိမ်လခ၊ လျှပ်စစ်ခ၊နောက်တစ်ခြားကုန်ကျစရိတ်တွေနဲ့ 
ဒီပညာကိုစနစ်တကျသင်ပေးပြီးရင် တစ်ကယ်လုပ်စားနိုင်အောင် အနည်းဆုံး
လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်(ဒုတိယအဆင့်)လက်မှတ်ပါရအောင် သက်ဆိုင်ရာနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး
သူတို့ စစ်မဲ့စာမေးပွဲနဲ့ ကိုက်ညီအောင် စာတွေ့ လက်တွေ့ သင်ပေးစေချင်တယ်။
နောင်ဆိုရင် လက်မှတ်ပြနိုင်မှ အဆင်ပြေမှာနော်။နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ရမယ်လေ။
ဒါကြောင့်အခုကတည်းက ဒီအဆင့်ကိုမှန်းပြီး စသင်ပေးစေချင်တယ်။
နောက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ချက်၊လျှပ်စစ်ဥပဒေနဲ့ အညီ
စနစ်တကျ လုပ်တတ်အောင် သင်ပေးစေချင်တယ်။
အဆင့်မီအောင်သာသင်ပါ၊နောက်ပိုင်းကိုယ်ရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့စေတနာတွေကြောင့်
ပံ့ပိုးကူညီမဲ့ အဖွဲ့ အစည်းရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
ပံ့ပိုးကူညီမဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေ ဒီလိုဦးဆောင် သင်ကြားပေးမဲ့ ဆရာကောင်းတွေ လိုက်ရှာနေပါတယ်။
the best ပေးတဲ့အကြံအဥာဏ် ပေးတာလေး မဆိုးဘူးစွယ်တော်ရွက်လေးရေ…
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သင်တန်းကာလ(၂)နျစ်လောက်နဲ့ Associate Degree /Junior Degree ပေးနိုင်တဲ့ vocational training တွေ များများပေါ်ပေါက်လာဘို့။ ဖြစ်နိုင်ရင် ခရိုင်ရုံးစိုက်ရာမြို့ကြီးတွေတွေက စပြီး ဖွင့်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ vocational training တွေအမြောက်အမြားပေါ်ထွက်လာဘို့အထောက်အကူဖြစ်မဲ့ ပြည်ပအကူအညီတွေလိုအပ်နေပြီ၊ ဥိးစားပေးရမဲ့ကိစ္စ တိုတဲ့ စကားနဲ့ တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ။) အထူးသဖြင့်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ဟာ မြန်မာပြည်သူတွေမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပါ။ (အစိုးရရဲ့အသေးစားနဲ့အလတ်စားေ၇အားလျှပ်စစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖိတ်ခေါ်ချက်အချိန်နဲ့လဲတိုက်ဆိုင်နေချိန်မို့) ဒိလိုသင်တန်းတွေက နတ်လူသာဓုခေါ်မဲ့ကိစ္စ မို့ လေးစားစွာနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ စခါစမှာအခက်အခဲရှိနိုင်ပေမဲ့ လူထုရဲ့ဥိးစားပေးလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပြီးအစိုးရကလည်း ကူညီမယ်ဆိုတဲ့စကားရှိထားပြီမို့ (ပေးရကမ်းရတဲ့ကိစ္စတွေကင်းနိုင်ရင်တော့) အောင်မြင်စရာ လုပ်ငန်းကြီး၊ ကုသိုလ်ရ၀မ်းဝမဲ့ကိစ္စကြီးလို့ဂုဏ်ယူမိပါတယ်…Go စွယ်တော်ရွက် Go!
သာဓု ၃ကြိမ် ခေါ်သွားပါတယ် ခဗျာ
အားကျခြင်း များစွာ နဲ့ ဂုဏ်ယူပါတယ် စွယ်တော်ရွက်ရေ။
အောင်မြင်မှာလို့လဲ အသေအချာ ကို ယုံကြည်ပါတယ်။ :-)
ကမိုးညို စာ ကို ဆက်လိုက်မယ်။
Go စွယ်တော်ရွက် Go!
You can do it !!!! :-)
(ဥပမာ အသံချဲ့စက်ကြီးနဲ့ မိုက်ကိုင်ပြီး ကြော်ငြာတာမျိုး… )
ကျွန်တော်လဲ အရီးလတ် စာကို ဆက်လိုက်မယ်
ကျွန်တော်တို့ ရွာသားတွေ မညံ့ပါဘူးနော ၊
သူများထက် မသာရင်တောင် မညံ့တာတော့ သေချာပါတယ်
အောင်မြင်ပါစေ လို့ မပြောတော့ပါဘူး ၊
အောင်မြင်မယ် ဆိုတာက သေချာနေတာ ကို
၀မ်းသာပါတယ် ကိုဆွယ်တော်ရွက်ရေ… နိုင်ငံခြားက ပြန်လာပီး ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ. သင်းတန်းလေးဖွင့်တာ အရမ်းကို ၀မ်းသာမိပါတယ်ဗျာ….
ကျွန်တော် ကူညီနိုင်တာရှိရင် ကူညီချင်ပါတယ်…နော်…
စွယ်တော်ရွက်ရဲ့ “စွယ်တော်ရွက်” လျှပ်စစ် လက်တွေ့သင်တန်း
သင်တန်းဖွင့်နိုင်လို့ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ စေတနာအရင်းခံပြီး လုပ်တာဖြစ်လို့ အောင်မြင်မှာ သေချာပါတယ်။
ဂုဏ်ယူပါတယ် မမစွယ်တော်ရွက်ရေ ..
A very bright future is awaiting you! …
ကောင်းတယ်ဗျာ။ အားပေးတယ်၊ ဘာပဲ ပြောပြော ကျနော်တို့ MG က လူတွေထဲမှာ စီးပွားရေး၊ပညာရေး အစစအရာရာ မှာ ပေါ့ အောင်မြင် ပြီး လူ တွေ အတွက် ၀မ်းသာ ဂုဏ် ယူ နေရ သလို၊
ကိုစွယ်တော်ရွက် တယောက်လဲ အောင်မြင် ဖို့ လမ်းကြောင်းတခု ကို စတင် လှမ်းနေပြီ ဆို တော့ မင်္ဂလာ သတင်တခု အဖြစ် မှတ်ယူပါရ စေ နော်။
တလက်စ တည်း ကျနော့် ခံယူ ချက် လေး ဆက်ပြောရ ရင် MG သံယောဇဉ် ဘယ်လို ထားတယ် ဆို တာလေး ပါ။
သင်္ဃန်း ၀ယ်မယ် ဆိုရင် ပံထူးသာ မှာ ၀ယ်ဖို့ ရည်ရွယ် ထားသလို ပေါ့၊
ပတ်သက်ရာ ပတ်သက်ကြောင်း တွေ လျပ်စစ် သင်တန်း တက်ဖို့ ရှိလာရင်လဲ ကိုစွယ်တော်ရွက် သင်တန်း ကို ပဲ ပို့ မှာ ပါ။
သင်တန်းသားပို့ပေးရင် comm; ဘယ်လောက်ပေးမလဲနောက်မလို့ ပို့စ်လေးဖတ်ပြီးတဲ့နောက် မနောက်တော့ပါဘူးနော်.. သင်တန်းရဲ့သဘောသဘာဝနဲ့နာမည်ကတော့သိပ်မလိုက်သလိုထင်ရပေမယ့်
တည်ထောင်သူရဲ့ (သင်တန်းကျောင်းလေးရဲ့ Logo ကိုစွယ်တော်ရွက်ပုံလေးရဲ့ ရွက်လွှာတစ်ခြမ်းမှာ ”အတတ်” နောက်တစ်ခြမ်းမှာ “အသိ” ) ဆိုတဲ့အတွေးလေးက ဟုတ်သား.. လိပ်စာလေးလည်းတင်ပေးပါ..နီးစပ်တဲ့သူ တက်ချင်တဲ့သူတွေရှိရင် လက်တို့ပေးလိုက်ချင်လို့ပါ.. အောင်မြင်တည်တံ့ပါစေလို့ဆန္ဒမွန်နဲ့ဆုတောင်ပေးလိုက်ပါတယ်.
ကိုစွယ်တော်ရွက်ရေ … Congratulation ပါ ။
တစ်လောက ဖွင့်ဖို့ နေရာထိုင်ခင်းတွေ့ပြီပြောတုန်း .. အခုလို လက်တွေ့ဆန်ဆန် … မြန်မြန်ဆန်ဆန်အကောင်ထည်ဖော်လိုက်တာလည်း …. အရမ်းကောင်းပါတယ် ။
ကိုယ်တတ်တဲ့ ပညာနဲ့ ..ကိုယ့်နိုင်ငံတွင်းက လူငယ်တွေကို တဖက်တလမ်းက အကျိုးပြုနိုင်ပါစေနော် … ။
ကျုပ်ကတော့ အနီးဆုံးလူ ဆိုသလိုဖြစ်နေတော့
ကိုယ်ပိုင်အလုပ် လုပ်မှာလည်းဖြစ် ကိုယ်ဝါသနာ
ပါတဲ့ ဘာသာရပ်လည်းဖြစ်တော့ မလွဲမသွေ
အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ သင်တန်းကြီးအထိ၊နိုင်ငံအသိအမှတ်ပြု သင်တန်းကြီးအဖြစ် အောင်မြင်ပါစေကြောင်း ကျော် ဆုတောင်းပေးပါရစေခင်ဗျား..
ခုမှ အစဆိုတော့ ကိုယ်ပိုင်နေရာလေးမှာ ဆိုင်လခ မကုန်တဲ့နေရာလေးမှာ ဆို ပိုအဆင်ပြေမှာနော်…
ဒါပေမဲ့.ခုငှားနေတဲ့.နေရာကလဲ အချက်အချာကျတယ်ဆိုတော့ အဆင်ပြေမှာပါနော်…
အပြုသဘော နဲ့ ပြောချင်တာပါ၊ အားပေးပါတယ်၊ ကို့စ်က ကျန်သေးလား၊ အဲဒါလေးပဲ ဆိုရင် နည်းလွန်းတယ်နော်၊ သေသေချာချာ တစ်ယောက်ချင်း သင်ရင်တောင် အလွန်ဆုံး (၃) ရက်စာလောက်ပဲ ရှိမယ်။ အခု THS တွေသင်နေတာ အဲဒီထက် များတယ်၊ ရန်ကုန် ရောက်ရင် လာပြီး လေ့လာဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ် ဗျာ၊
လောလောဆယ် အခြေခံ Module ၂ ခုနဲ့ Motor Control Module (၄)ခုစာ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ သင်တန်းသားတွေတောင်းဆိုခဲ့ရင် ထပ်ချဲ့ပေးပါ့မယ်။
Warmly welcome to Swal Taw Ywet Electrical Practical training courses.
ကောင်းပါတယ်ဗျာ ပလဲဇန်း တောင်းတာဝါသနာပါလို့
( မီးတစ်ပွင့်ကို နေရာ (၂) နေရာကနေ ထိန်းတဲ့ Two Way Switch တပ်ဆင်ဆက်သွယ်နည်း ) လေး
( မီးတစ်ပွင့်ကို နေရာ (၃ ) နေရာကနေ ထိန်းတဲ့ Two Way Switch တပ်ဆင်ဆက်သွယ်နည်း ) လေးပါ
ဘကြီးပုရဲ့ မပြီးသေးတဲ့ ကွန်မဲ့ ဇတ်လမ်းအဆုံးသတ်မှ ပေးမယ်လို့ ပြောပါဗျို့ ..
မောင်မှတ်(ခ)ကိုသစ်မင်း ပျောက်နေတာ..ကြာပါရောလား……။သတိတော့ရတယ်ဗျာ သူ့ကို ( မန်ဘာဝင် ၃၀၀ ခေတ်ကတည်းက သူ့ကို သိလာတာ။ မှတ်မှတ်ရရ သူကြီးက မြန်မာပြည်းအကျဉ်းသားတွေလွတ်တဲ့နေ့ကစပြီး မန်ဘာဝင် ၅၀၀၀ ပေးတာ။) ကိုစွယ်တော်ရေ…ဆက်လုပ်ဗျာ အားပေးတယ် ..။ ကျနော် လှည်းတန်းမှာ သင်တန်းတစ်ခုဖွင့်ထားပါတယ်..contribute လုပ်လို့၇မယ်ကိစ္စတွေရှိရင်လက်တို့လိုက်ပါ… (ပရဟိတ ဆိုလည်း ကျနော်မငြင်းဘူး ) ကျနော်လဲ နည်းပညာလိုင်းထဲကပါပဲ..။ ဂေဇတ်သားတွေ မညံ့ပါဘူး..။ ဆက်လုပ်ရဲဘော်….
တကယ်ကို ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီပဲ။
ရှေ့ဆက်၍ အောင်မြင်မှုများကို ရယူနိုင်ပါစေ။
အတတ်ပညာများ ဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့် ကြယ်ငါးလေးများစွာကို ပင်လယ်ထဲ ပြန်ပို့ပေးနိုင်ပါစေ။
ကိုယ်တိုင် ကြယ်ငါးလေး ဖြစ်နေပြီလားလို့ သံသယ ၀င်နေမိပါပြီဗျို့…..
အကြံပြုတဲ့ အပ်ထည်လက်ခံတဲ့2Way မျိုးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ လက်ရာရှိပါတယ်။
ဒါပေသိ ဟိုတလောက မှော်ဘီဘက်က ဘီဘီ စက်ရုံကြီးတစ်ခုအတွက် Distribution Board တွေကိုတောင် စလုံးက တိုက်ရိုက်ဆင်ပြီးသားတွေပဲ သုံးတာဆိုတော့ ပြည်တွင်းက မျက်နှာမွဲလေးတွေခင်ဗျာ…. ငိုချင်ထှာ…
အပ်ချုပ်သင်တန်းတွေလိုမျိုး သင်တန်းသားလက်ခံရင်း အပ်ထည်လည်း လက်ခံရင် အကျိုး၂ မျိုးရနိုင်တဲ့2way ဆိုရင် ပိုအဆင်ပြေမလားလို့။
သင်တန်းသားတွေ ဆာတီဖကိတ်ရပြီးရင်.. မလေးရှား။ ကာတာနိုင်ငံတွေမှာ.. အလုပ်အကိုင်ပါချိပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုရင်.. သင်တန်းသူားတွေများပိုရမလားပဲ..
လောလောဆယ် .. မားကက်တင်းပေါ့..
အချွန်နဲ့ “မ” တာပါလား….
ကျောင်းဆရာ… စာချည်းသက်သက် သပ်သပ် သတ်သတ် သင်တာပဲ ပိုထိရောက်မှာပါ။ Agent အလုပ်ပါတွဲရင် ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ဖြစ်ယုံပေါ့။ လိုင်စင်မယူပဲ လူပို့ပါတယ်ဆို… လူကုန်ကူးမှုနဲ့ပါ ငြိနေပါဦးမယ်။
စကားအတင်းစပ်.. သင်တန်းကြော်ငြာကို post တစ်ခုအနေနဲ့ တင်ပေးရင် Sticky ပေးထားမှာလားဟင်….
In future, after getting success, I can get contact with some MG villagers who can do Agent for oversea Jobs. Yes, I haveadream and I have some HR contact.
Let me try my best for our mother land.
တပိုင်တနိုင် သင်တန်းလေးကနေ နိုင်ငံကျော်သင်တန်းဖြစ်တဲ့အထိအောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
သင်တန်းမှာသင်မယ့် course၊ သင်တန်းချိန်တွေ၊ သင်တန်းကြေးတွေ တစ်ခါတည်း ထည့်ရေးလိုက်ရင် ရွာသားတွေ လက်တို့လို့ရတာပေါ့.. အင်း ကြော်ငြာဝင်တယ်ပြောမှာလည်း စိုးရသေးတယ်နော..
Let try our best for our mother land. OK?
(copying your words) ရွာစားကျော်